Nhau - Chii chatinofanira kuteerera kana tichisarudza fenicha yekunze
Chii chatinofanira kuteerera patinosarudza fenicha yekunze
Zvinoenderana nemaitiro ako ekushongedza
Kunyangwe iyo fanicha inoshandiswa yekunze, asi zvakare inofanirwa kuenzanisa iwo wese ekushongedza maitiro kuita sarudzo. Kana iwe uchida kuisa seti yemidziyo yekunze pabharanda kana patio, iwe unofanirwa kufunga kuti ndeupi manyorero ako ekushongedza ari.Tichifunga ndeye yegadheni dhizaini, inofanirwa kusarudza fanicha yakakodzera yeiyo gadheni dhizaini. Szvakafanana, inofanirwa kusarudza fashoni yemazuva ano fenicha riinhi ndezvechimiro chazvino,
Funga nezvekushandiswa kwemidziyo yekunze
Iko kushandiswa kwakasiyana kwebhokisi kana patio nemunhu wese. Paunenge uchisarudza, unofanirwa kutarisa mashandisiro ako ebhokoni kana patio kutanga. Inin kesi iyo iwe unoda kunakidzwa nenguva yekuzorora chinyararire, unogona kusarudza yekuzorora gadheni fenicha. Kana iwe uchida kudya, iwe unogona kusarudza yekudyira maseti.
Funga nezve saizi yemidziyo yekunze
Sarudzo yemidziyo yekunze inoenderana nenzvimbo yeberere redu, patio kana dzimwe nzvimbo dzekunze. Mushure mezvose, balcony inongotora nzvimbo yakaganhurirwa mumba medu.Zvichadaro kutambisa nzvimbo yakawandisa riinhi midziyo yacho yakanyanya kukura uye tarisa skimpy kana iri diki kwazvo. Naizvozvo, isu tinofanirwa kuyera nenzira kwayo tisati tasarudza, kana kusarudza inowoneka kana kutakurika fenicha yekunze, kuchengetedza nzvimbo zvakanyanya